Madaxweynaha Dalka Iyo Wafdi uu hoggaanimayo oo Baydhabo lagu soo dhaweyay – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya Md Xasan Sheekh Maxamuud Oo ay wehliyaan Ergayga Gaarka ah ee Q.midoobay u qaabilsan Soomaaliya, xubno ka tirsan labada Gole ee dowladda ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa garoonka magalada Baydhabo ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha Barlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo kummanaan dadweyne ah oo Caleemo qoyan Lulalayay, kuwaas oo Safnaa hareeraha Wadada u dhexeyo garoonka Diyaaradaha iyo Xarunta uu ka furmayo shirka lagu dhameystirayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ayaa furay shirka iyadoo haatay ay si toos ah magaalada Baydhabo ugu sacoto, xafladda shirkaasi lagu furayo oo si weyn loo hadal hayay maalmihii la soo dhaafay.
Ammaanka Magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana magaalada ku sugan Ergooyin kala duwan oo lagu casuumay, in ay shirkaasi ka qeybgalaan.
Hoggaamiyaha W/Kuuriya oo si kulul ula hadlay Mareykanka
SOMALIA: President Mohamud addresses speech to SNA in Defense ministry base in Mogadishu